Dhirta Daawada - Guangzhou Airwoods Deegaanka Teknolojiyadda Co., Ltd.
Dhirta Daawooyinka HVAC Solution
Dhirta dawooyinka waxay ku tiirsan yihiin waxqabadka qolalka nadiifka ah si loo hubiyo in heerarka alaabada ee muhiimka ah la gaaro. Nidaamyada HVAC ee soo saarista qaybo ka mid ah xarumaha dawooyinka waxaa si dhow u kormeera hay'adda dowladda. Ka gaabinta u hoggaansamida mid ka mid ah shuruudaha tayada ayaa milkiilaha ku galin kara qaanuunka iyo ganacsiga labadaba. Sidaa darteed waa muhiim in xarumaha dawooyinka lagu dhiso nidaam adag oo sifiican loo qeexay oo tayo leh. Naqshadaynta 'Airwoods', waxay dhistaa oo ilaalisaa nidaamka HVAC ee adag iyo qolka nadiifinta ee buuxiya baahida adag ee ku jirta xarumaha dawooyinka.
Shuruudaha HVAC ee Daawada
Shuruudaha tayada hawada gudaha ee goobaha dawooyinka, oo ay ku jiraan xakamaynta huurka iyo sifeynta ayaa ka mid ah kuwa ugu adag ee codsi dhisme kasta. Mid ka mid ah geedi socodka ugu halista badan waa hawo habboon. Sababtoo ah ujeedada koowaad waa xakamaynta wasakhda wax soo saarka iyo aagga cilmi baarista, siigada iyo microbe waa hanjabaadaha joogtada ah ee ka dhex jira xarumahan, oo u baahan nidaam si taxaddar leh loo qorsheeyay oo shaandheyn iyo hawo qaadasho ah oo u hoggaansamaya heerarka tayada hawada gudaha ee adag (IAQ) waxayna caawineysaa yareynta soo-gaadhista cudurada hawada iyo wasakhda.
Intaa waxaa sii dheer, maxaa yeelay xarumaha dawooyinka waxay u baahan yihiin xakameyn cimilo oo joogto ah, oo wax ku ool ah, waxaa muhiim ah in nidaamka HVAC uu yahay mid waara oo ku filan inuu si joogto ah u shaqeeyo, haddana si hufan ugu filan si uu u ilaaliyo kharashyada tamarta sida ugu yar ee suurtogalka ah. Ugu dambeyntiina, sababta oo ah aagagga kala duwan ee xarumuhu waxay lahaan doonaan hawo u gaar ah iyo baahiyo heer kulka, nidaamka HVAC waa in loo qaabeeyaa si uu ula qabsado shuruudaha kala duwan ee xakamaynta cimilada ee qaybaha kala duwan ee xarunta.
Warshad Daawadeed oo Adag
Warshadda dawada ee dareeraha ah
Warshadda Dawada Cuntada
Warshadda dawooyinka budada ah
Dharka Oo Patch Farmashiyaha Warshad
Soo saaraha Qalabka Caafimaadka
Xalalkayaga HVAC, Nidaamyada Saqafyada isku dhafan, iyo Habeynta Nadiifinta qolka waxay kaa caawinayaan buuxinta shuruudaha adag ee warshadaha wax soo saarka dawooyinka, oo u baahan xakameyn adag iyo wasakhda sunta ah.
Waxaan qabannaa qiimeyn buuxda oo ku saabsan baahida macaamiisheena waxaanan siineynaa naqshad dhameystiran iyada oo la tixgelinayo habka wax soo saarka, qalabka, nadiifinta qaboojiyaha, bixinta biyaha iyo bullaacadaha, tilmaamaha dowladda iyo xeerarka.
Soosaarida dawooyinka, waxsoosaarka iyo waxtarka ayaa fure u ah guusha. Naqshadeynta naqshadayntu waa inay ahaataa mid macquul ah oo iswaafaqsan iyadoo loo eegayo shuruudaha habka wax soo saar, taas oo ku habboon hawlgalka wax soo saarka isla markaana hubinaysa maareyn wax ku ool ah ee habka wax soo saarka.
Nidaamka nadiifinta hawada, waxaa jira laba fikradood oo muhiim ah. Mid waa xakameynta cadaadiska togan si looga hortago saameynta hawada dibadda ay ku leedahay deegaanka; Iyo xakamaynta cadaadiska xun si looga hortago faafitaanka wasakhda wasakhda ee habka wax soo saarka. Haddii aad u baahan tahay cadaadis hawo wanaagsan ama qolka nadiifinta cadaadiska hawada ee xun, soo saare qibrad u leh nadaafadda iyo qeybiyaha, sida Airwoods, ayaa xaqiijin kara qaabeynta, horumarinta, iyo gaarsiinta xalka baahidaada buuxiya. At Airwoods, khubaradeennu waxay aqoon buuxda u leeyihiin dhammaan naqshadeynta nadaafadda iyo hannaanka dhismaha, laga bilaabo qalabka nadaafadda iyo hababka ugu fiican ilaa qalabka HVAC ee loogu baahan yahay noocyada kala duwan ee codsiyada.
Xarunta Xakamaynta Cudurada PCR Nadiifinta
Qolka Nadiifinta Soosaarida Maaskarada La Tuuri Karo
Warshadda dawooyinka ee Bolivia
Mashruuca Nadaafada Daawada Cambodia
Qolka Nadiifinta Wax Soo Saarka irbadaha ee Bangladesh
Mashruuca Nadaafada Daawada Bolivian